2019-12-11 11:14:02 , Diploma in Hospitality Managem…
Diploma in Hospitality Management (IQN,UK)
? Hospitality Management ဘာသာရပ်ဟာ ဧည့်သည်ရဲ့ လိုအပ်ချက်များကို အထူး စိတ်ကျေနပ်မှု ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ကြတဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တွေမှာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာများကို ပိုမိုသိရှိနားလည်စေတဲ့ ဘာသာရပ် တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
? လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ ထုတ်ကုန်ဟာ အလွန်ကောင်းနေပေမယ့် ဧည့်ဝတ်ပျူငှာတဲ့နေရာမှာ ပြဿနာရှိနေရင် ဈေးကွက်မှာ နာမည်ပျက်ပြီး ရေရှည်ရပ်တည်ဖို့ ခက်ခဲတတ်ပါတယ်။ ထုတ်ကုန်ကလည်း ရည်အသွေးမှန်၊ Hospitality လည်း ပြောစရာမလိုအောင် ပြည့်စုံနေပြီဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီလုပ်ငန်း အောင်မြင်မှာ သေချာပါတယ်။
? Hospitality ကောင်းတဲ့ (သို့) ဧည့်ဝတ် ကျေပွန်တဲ့ မိသားစု၊ လူမျိုး၊ နိုင်ငံဆိုရင်လည်း အခြားသူများက ချစ်ခင်လေးစားသမှုနဲ့ ပြောဆို ဆက်ဆံကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံဟာလည်း ဖော်ရွေပြီး ဧည့်ဝတ် ကျေပွန်တဲ့ နေရာမှာလည်း အထူးနာမည်ရလှပါတယ်။
? ဒါကြောင့် ဒီလို ရည်ရွယ်ချက် ကောင်းမွန်တဲ့ Hospitality Management ဘာသာရပ်ကို Diploma ဘွဲ့ရအောင်ထိ တက်ရောက်လိုပြီး မိမိရဲ့ လုပ်ငန်းခွင် အောင်မြင်မှုကို ပိုမိုမြင့်မားစွာ ပိုင်ဆိုင်လိုကြသူများ အတွက် White Richmond Business School မှာ IQN Diploma ဘွဲ့ယူနိုင်မယ့် Diploma in Hospitality Management တန်းခွဲသစ်ကို ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်နေ့မှာ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
? ဒီအတန်းမှာ ဘာတွေသင်ရမှာလဲ? ?
? Introduction to Hospitality Management,
? The Hotel Business,
? Rooms Division,
? The Accommodation Industry,
? The Food Service Industry,
? The Restaurant Business,
? Restaurant Management,
? External Influences Affecting the Industry,
? The Growth of Global Hospitality Brands,
? Quality Management in the Global Hospitality Industry,
? Special Events,
? Leadership and Management,
?‍? ဒီသင်တန်းကို ဘယ်လိုလူတွေ တက်ရောက်သင့်လဲ ?‍?
– Hospitality ကို Management ပိုင်း စိတ်ဝင်စားသူများ၊
– လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေသူများ၊
– နိုင်​ငံတကာအသိအမှတ်​ပြုလက်​မှတ်​ ရယူလိုသူများ၊
– ဟိုတယ်လုပ်ငန်းများနှင့် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကိုင်နေသူများအတွက် ဧည့်ဝတ်ပျူငှာခြင်း စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာများကို သင်ယူလိုသူများနှင့် Diploma ဘွဲ့လက်မှတ် ရရှိလိုသူများ၊
– Travel Agency များနှင့် Tour Company များတွင် လုပ်ကိုင်လိုသူများ၊
– အစားအသောက်နှင့် အဖျော်ယမကာ ရောင်းချသော စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကိုင်နေသော မန်နေဂျာများ တက်ရောက်သင်ယူသင့်ပါတယ်။
? ​ရရှိနိုင်မယ့် အကျိုးကျေးဇူးတွေ …
– Diploma in Hospitality Management course ကို တက်​​ရောက်​ခြင်းအားဖြင့်​ Hospitality Sector တွင်​ သိရှိရန်​ လိုအပ်​​သော Concepts များ၊ Skills များကို သိရှိနားလည်​လာနိုင်​မှာပါ။
– သင်​တန်းမှာ​ Hospitality Sector နဲ့ Tourism Sector ရဲ့ ခြားနားချက်​များ၊ Hotel Guest ​တွေရဲ့ type ​တွေကို သိရှိလာနိုင်​မယ့်​အပြင်​ Guest ​တွေရဲ့ လိုအပ်​ချက်​​တွေကိုပါ သိရှိလာ​မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
– ဒီ Diploma in Hospitality Management အတန်းကို တက်ရောက်သင်ယူနေတဲ့ အချိန်မှာ ဟိုတယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းလည်ပုံများ၊ ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာ စီမံမှုများနဲ့ ဧည့်ခံမှုဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများ၊ ဝန်ထမ်းများကို ခန့်ထားအုပ်ချုပ်တဲ့ ပညာရပ်တွေကို မိမိရဲ့  လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံများနဲ့ ပေါင်းစပ်သင်ယူနိုင်ပါတယ်။
– ဒါ့အပြင်​ Front Office Department, Housekeeping Department, Food & Beverages Department, Restaurant Operation Department တို့်​ရဲ့ လုပ်​​ဆောင်​ချက်​​တွေကိုသာမက Hotel တစ်​ခုမှာရှိတဲ့ အခြား Department များရဲ့ လုပ်​​ဆောင်​ချက် ​အခန်းကဏ္ဍများကိုလည်း သိရှိလာနိုင်​ခြင်း စတဲ့အကျိုး​ကျေးဇူး​တွေနဲ့ လက်​​တွေ့အသုံးပြုနိုင်​​အောင်​ သင်​ကြား​ပေး​မယ့် သင်​တန်းဖြစ်​ပါတယ်​။
– သင်​တန်းကာလအတွင်း Hotel ​လေ့လာ​ရေး ကွင်းဆင်း အ​တွေ့အကြုံပါဝင်​မှာ ဖြစ်​တဲ့အတွက် စာတွေ့ကော လက်တွေ့ပါ ကိုယ်ကြိုးစားရင်ကြိုးစားသလောက် နားလည်တတ်မြောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
?‍? သင်ကြားမည့် ဆရာ ?‍?
(Top Hotelier Consultant group)
MPA, B.A(Eng), ASEAN National Trainer
(MOHT-Myanmar Hotelier Association)
ဇန်န၀ါရီလ ၉ ရက် (​ကြာသပတေးနေ့)
> ၁ ပါတ် ၃ ရက်​ <
ခန့်မှန်းခြေ ၃ လ (နာရီ ၅၀)
ညနေ ၆ နာရီမှ ည ၈ နာရီ အထိ
? Aircon ခန်းထဲတွင် ​​တစ်ဦးခြင်း ဂရုတစိုက် သင်ကြား​ပေးမှာဖြစ်ပြီး
? ကော်ဖီ၊ အအေး
? တစ်ဦးချင်းအလိုက် ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်ရေးရာများကို စိတ်တိုင်းကျ တိုင်ပင်နိုင်ခြင်း အပြင်
?လူဦးရေကန့်သတ်သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် သင်ကြားပေးမယ့်ဆရာနဲ့ အနီးကပ်ဆွေးနွေးနိုင်ခွင့်ရှိပြီး မိမိတွင်ရှိနေသော အရည်အသွေးများကို အချိန်တိုအတွင်း ငွေကြေးအကုန်အကျနည်းစွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက် အမြန်လာရောက်အပ်နှံဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။?
This entry was posted in Training and Class on 2019-12-11 by admin.
← 2019-12-10 14:34:31 , 2019-12-11 17:22:53 , ၀င်ငွေ၊လစာ နှစ်ဆ တိုးဖို့ သင်ခောင်းခဲနေပြီလား..? →